Kumaa hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka Serie A ee Waddanka Talyaaniga? – Gool FM
Kumaa hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka Serie A ee Waddanka Talyaaniga?
Haaruun September 27, 2016
(Milano) 27 Sebt 2016 – Kulamadii Lixaad ee horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray, waxaana haatan hoggaanka u haya gooldhalinta horyaalka Talyaaniga weeraryahanka reer Argentina ahna kabtanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi, kaasoo lix kulan oo uu ciyaaray dhaliyey 6 gool.
José Callejón oo ka tirsan kooxda Napoli, laacibka Andrea Belotti oo u safta naadiga Torino iyo Carlos Bacca oo Milan ka tirsan ayaa ku wada jira kaalinta labaad ee gooldhalinta horyaalka Serie A lix kulan oo la ciyaaray waxaana ay wada leeyihiin min 5 gool.
Xiddigo dhowr ah oo ay ku jiraan laacibka kooxda Roma ee Edin Dzeko iyo weeraryahanka kooxda Juventus ee Gonzalo Higuaín ayaa iyaguna wadaaga min afar gool.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka ciyaaryahan ee ugu sarreeya haatan gooldhalinta horyaalka Serie A:-
Mauro Icardi (Inter Milan) – 6 gool
José Callejón (Napoli) – 5 gool
Andrea Belotti (Torino) – 5 gool
Carlos Bacca (Milan) – 5 gool
Edin Dzeko (Roma) – 4 gool
Franck Kessié (Atalanta) – 4 gool
Gonzalo Higuaín (Juventus) – 4 gool
Arkadiusz Milik (Napoli) – 4 gool
Gregoire Defrel (Sassuolo) – 4 gool
Marco Borriello (Cagliari) – 4 gool
HOR DHAC: Dortmund Vs Real Madrid
Sidee loo kala hoggaaminayaa gooldhalinta horyaalka La Liga ee Waddanka Spain?